Murdoch University, Dubai - Waxbarashada Sare ee Imaaraadka
gaabinta : Mud
aasaasay : 2008
Ha iloobin in aad wada hadlaan University Murdoch, Dubai
Qor at University Murdoch, Dubai
Welcome to University Murdoch in Dubai, UAE. Waxaan nahay mid ka mid ah jaamacadaha keentay Australia in Dubai oo ah meel halkaas oo aqoon yahanno xor ka ah adduunka oo dhan ay isu yimaadaan si ay u sameeyaan isbeddel. Waxaan ku faani our sumcad caalami ah sare ee waxbarid, cilmi-baarista iyo arday qanacsanaanta.
University Murdoch in Dubai waxa uu ku yaalaa wadnaha ee International Dubai ee City cajiib Academic . dhidibada loo aasay 2007, Annagu waxaannu nahay campus laanta of University Murdoch a, mid ka mid ah jaamacadaha keentay baxaya Australia. campus Our guriga ee Perth, Western Australia, leedahay in ka badan 22,000 ardayda iyo 2,500 shaqaalaha ka guud ahaan ku dhowaad 100 dal oo kala duwan, waxbarasho in ka badan 200 koorsooyinka ama heerkoodu sareeyo undergraduate iyo postgraduate, in ka badan kala duwan oo dhamaystiran of nidaamo iyo xirfadaha. Murdoch ayaa kasbaday sumcad caalami ah oo tayo leh ee ay cilmiga iyo cilmi badan ee la soo dhaafay ka 35 sano, sida waxa uu ku koray iyo qaan. In 2014, Murdoch taagan 60aad ee darajayn Tacliinta Sare Times of kooxda aduunka ugu fiican 100 jaamacadaha ka yar 50 sano jir ah, 8aad ugu badan oo ka mid ah 14 Jaamacadaha Australia waxay ka mid hogaanka 100, caddeynta ay nooga go'antahay in cilmiga gaarka ah iyo waxbarasho fiican ee ardada oo ka mid ah cilmi-baaris oo tayo sare leh.
At Murdoch Dubai inaad heli doonto shahaado si buuxda u aqoonsan yahay Australia ay aqoonsi caalami ah la xiriira. Dhammaan barnaamijyada waxaa aqoonsan by Education Quality Standards Agency Tertiary ah (TEQSA) Australia gudaha iyo idman oo ay Aqoonta iyo Maamulka Horumarinta Aadanaha (Kdaa). Heerarka wareejin isku eegin codsan in aad waxbarasho ee Perth, ee Dubai ama mid ka mid ah xarumaha noo dabeecad gobolleed ama caalami kale. ardayda waxay fursad u leeyihiin si ay u gudbiyaan credits kasbadeen guud ahaan network of xarumood aan sal gaaban ama muddo-dheer ah, waayo-aragnimo waxbarasho oo dhab ah oo caalami ah.
Waxaan xoogga weyn on tayada ardayda 'waayo-aragnimo waxbarasho iyo jaamacadaha. Waxaan ku faanaa tayada of our content waxbaridda iyo manhajka iyo asal ahaan dhaqamada. Iyadoo in ka badan 600 ardayda, baray by awood caalami ah, oo dunida ku baahsan, Murdoch University Dubai waa meel dhiirrigelin iyo firfircoon si ay u bartaan. Waxaan ku siin xarumaha fiican ardayda: technology goynta-ku laayeen, goobaha cilmiga casriga ah iyo taageero arday ka go'an barashada, taageerayaan awood u gaar ah oo wax bartay caalamka. Waxaan bixinaa kala duwan oo ka mid ah barnaamijyada degree undergraduate iyo graduate. At heerka undergraduate, waxaan bixiyaan koorsooyin ku Business (maaliyadda,maamulka, iyo suuq-), Technology Information (sayniska kombiyuutarka iyo ganacsiga nidaamka macluumaadka) iyo Maaday iyo Isgaarsiinta (saxaafadda, xiriirka dadweynaha, wax soo saarka andscreen). At heer sarre, waxaan ku siin Master ah Maamulka Ganacsiga iyo Master a of Education. Ardayda aan isreebreebka toos galo oo doonaya dariiqa kale galay jaamacad ka fiirsan kartaa dhamaystirka barnaamijka associatedfoundation our. Tani waxay ka qabtaan baahida dugsiga sare, ardayda caalamiga ah iyo kuwa qaan doonaya in ay helaan galay shahaado jaamacadeed entry.
si joogto ah Waxaan ku dadaaleynaa in ay la kulmaan caqabado gaar ah in ka fool ardayda Imaaraadka Carabta iyagoo doonaya inay qaataan door hogaamineed ee gobolka iyo dunida oo dhan. All qalin waxaa diyaarshay xirfadaha muhiimka ah ee xidhiidhka iyo fikirka hal abuur leh, aqoon la taaban karo oo qoto dheer in ay ka dambeeyaan, iyo wacyi ah aragtiyaha caalamka. Waxay muujiya iyo falanqeey maskax yihiin, kalsooni ah in la qaato meel masraxa caalamiga ah. Waa raaxaysi iyo sharaf si aad u soo dhaweynaynaa in University Murdoch in Dubai. Kooxdayada quduuska ah shaqaalaha horay u muuqataa in ay aad u taageeraya in aad safar xiiso leh waxbarashada iyo sahaminta.
Dr Max Sully, Dean iyo Madaxweynaha Academic
barnaamijyada shahaadada hoose
School of Management iyo Maamul
Bachelor ee Xiriirka Dadweynaha
Bachelor in Production Screen
School of Engineering iyo IT
Murdoch University waa mid ka mid ah shan jaamacadood ee Western Australia, si rasmi ah looga on 25 July 1973, bilaabo maalinta Guddoomiyaha soo magacaabay xubnaha ugu horeeya ee Senate University ee ku xusan qaybtan 12(1)(9) ee Xeerka University Murdoch ah. Waxaa la jaamacadda labaad aasaasay Western Australia iyo toddoba ee Australia. Murdoch lahaa toban Professors Foundation. Aasaaskii xigeenka Chancellor ahaa Professor Stephen Griew. Professor Aasaaskii Jaamacadda ahaayeen culimada of taagan caalamiga ah iyo in ay University Murdoch ula yimaadeen sharafta Sharaf ah heerka ugu sareeya ee beeraha ay ka soo jeedaan. Waxay si rasmi ah u bilaabatay on waajibaadka 1 July 1973. In 1975, sanadka ugu horreeya, University Murdoch ku qoran 672 ardayda undergraduate. maanta, University Murdoch ayaa dadka arday ka badan a 18,000 lugu daro 2,000 ardayda caalamiga faafay guud ahaan saddex xarumood ee Western Australia iyo Xarumaha Study International ee Singapore, Malaysia, Japan iyo Dubai
Ma rabtaa wada hadlaan University Murdoch, Dubai ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: Murdoch University, Dubai rasmiga ah Facebook
Murdoch University, dib u eegista Dubai
Ku biir si ay ugala hadlaan of University Murdoch, Dubai.
University of Wollongong ee Dubai Dubai